ỊWỤNYE CENTOS NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Hụkwa: Otu esi eji VirtualBox
Nzọụkwụ 1: Download CentOS
Ịnwere ike ibudata CentOS site na saịtị ọrụ ahụ n'efu. Maka mma nke ndị ọrụ, ndị mmepe emeela ụzọ 2 nke nkesa nkesa na ọtụtụ ụzọ nbudata.
Sistemụ arụmọrụ n'onwe ya dị na nsụgharị abụọ: mezue (Ihe niile) ma kpochapụ (Nke kachasị nta). Maka onye maara nke ọma, a na-atụ aro ka ibudata nsụgharị zuru ezu - enweghi ọbụna mpempe akwụkwọ na trimmed one, ọ bụghịkwa maka ụlọ obibi nkịtị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka dị mkpirikpi, na ibe CentOS isi peeji nke "Ikike kachasị". Ọ na-ebute otu ihe ahụ dị ka ihe niile, ihe nbudata nke anyị tụlere n'okpuru.
Ịnwere ike ibudata ihe ọ bụla site na iyi. Ebe ọ bụ na foto nha anya dị ihe dị ka 8 GB.
Iji budata, mee ihe ndị a:
Pịa na njikọ "ISO dị kwa site Torrent."
Họrọ njikọ ọ bụla site na ndepụta nke enyo na faịlụ faịlụ gosipụtara.
Chọta faịlụ ahụ na folda ọha na-emepe. "CentOS-7-x86_64-All-1611.torrent" (nke a bụ aha a kapịrị ọnụ, ọ nwere ike ịdịtụ iche, dabere na mbipụta nke ugbu a).
Site n'ụzọ, ebe ịnwere ike ibudata ihe oyiyi na usoro ISO - ọ na-esote n'akụkụ faịlụ torrent ahụ.
A ga-ebudata faịlụ faịlụ site na nchọgharị gị, nke nwere ike ịmeghe site na ngwa iyi nke arụnyere na PC na ibudata onyinyo ahụ.
Nzọụkwụ 2: Ịmepụta Machine Kwesịrị Ekwesị maka CentOS
Na VirtualBox, sistemụ arụmọrụ ọ bụla chọrọ igwewapụ iche iche (VM). N'oge a, a na-ahọpụta ụdị usoro a ga-arụ, a na-emepụta windo arụmọrụ na mgbakwunye agbakwunyere.
Mepee VirtualBox Manager wee pịa bọtịnụ. "Mepụta".
Tinye aha CentOS, na abụọ fọdụrụ ga-ejupụta na-akpaghị aka.
Kọwaa ọnụego nke RAM nke ị nwere ike ịtọ maka nhazi na ọrụ nke sistemụ arụmọrụ. Obere maka ọrụ dị jụụ - 1 GB.
Gbalịa igbanye ọtụtụ RAM dị ka o kwere mee maka usoro ihe dị mkpa.
Hapụ ịhọrọ "Mepụta windo diski ohuru ohuru ohuru".
Ụdị na-agbanwe ma na-ahapụ VDI.
Ụdị nchekwa nchekwa ọhụụ - "ike".
Họta nha maka HDD kwalitebere na dabere ohere ohere dị na diski ike anụ ahụ. Maka ndozi ziri ezi ma nweta nkwalite nke OS, a na-atụ aro ịnyefe ma ọ dịkarịa ala 8 GB.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-etinye ohere ọzọ, ekele maka usoro nchekwa dị egwu, a gaghị ejikwa gigabytes ndị a ruo mgbe ohere a dị n'ime CentOS.
Nke a mezighara usoro VM.
Nzọụkwụ 3: Hazie igwe kwadoro
Nzọụkwụ a bụ nhọrọ, ma ọ ga-aba uru maka ụfọdụ ntọala ndị bụ isi na nkwupụta mmeghe nke ihe nwere ike gbanwere na VM. Iji tinye ntọala ahụ, pịa aka nri na igwe na-emepụta ma họrọ ihe ahụ "Hazie".
Na taabụ "Usoro" - "Nhazi" I nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ nke ndị nrụpụta gaa n'ihu na 2. Nke a ga-enyekwu mmụba na arụmọrụ nke CentOS.
Na-aga "Gosi", ị nwere ike itinye MB na nchekwa vidiyo ma mee ka ọganihu 3D.
Ntọala ndị ọzọ nwere ike idozi onwe gị ma laghachikwute ha mgbe ọ bụla igwe anaghị arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 4: Wụnye CentOS
Isi na nke ikpeazụ: nhazi nke nkesa, nke ebudatara.
Mee ka igwe ighota kwuputa ya na igodo onu ma pịa bọtịnụ. "Gbaa ọsọ".
Mgbe ịmalite VM, pịa na folda ahụ wee jiri onye nyochaa usoro ihe omume akọwapụta ebe ebe ibudatara oyiyi os.
Usoro nhazi usoro ga-amalite. Jiri ugwo aka n'elu keyboard iji họrọ "Wụnye CentOS Linux 7" wee pịa Tinye.
Na ọnọdụ akpaka, a ga-arụ ọrụ ụfọdụ.
Onye nhazi nke usoro CentOS malitere. Ozugbo, anyi choro iburu n'uche na nkesa a bu otu n'ime ulo oru kachasi nke oma na enyi na enyi, ya mere o ga-adi mfe ime ya.
Họrọ asụsụ gị na iche iche ya.
Na windo na mpaghara, mezie:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme diski diski na otu nkebi na CentOS, gaa na menu ntọala, họrọ windo a kwadoro nke e kere na igwe mebere, wee pịa "Emere";
Nhọrọ nke mmemme.
Ndabara bụ nkwụnye kachasị, ma ọ nweghị njikwa eserese. Ị nwere ike ịhọrọ ebe gburugburu OS ga-arụ ọrụ: GNOME ma ọ bụ KDE. Nhọrọ ahụ dabere na mmasị gị, anyị ga-elekwa nwụnye ya na gburugburu KDE.
Mgbe ịhọrọ shea n'akụkụ aka nri nke windo ga-apụta ntinye. Ị nwere ike ịche ihe ị ga-achọ ịhụ na CentOS. Mgbe emechara, pịa "Emere".
Pịa bọtịnụ ahụ "Malite nrụnye".
Mgbe echichi (a gosipụtara ọnọdụ na ala nke windo dịka ogwe ọganihu) a ga-ajụ gị ka ịmepụta paswọọdụ mgbọrọgwụ ma mepụta onye ọrụ.
Tinye paswọọdụ maka mgbọrọgwụ (superuser) ugboro abụọ ma pịa "Emere". Ọ bụrụ na paswọọdụ dị mfe, bọtịnụ "Emere" chọrọ pịa ugboro abụọ. Echefula ka ịgbanwee nhazi keyboard na Bekee mbụ. Enwere ike ịhụ asụsụ ugbu a n'akụkụ aka nri nke window ahụ.
Tinye asambodo achọrọ na ubi "Aha zuru oke". Eke "Aha njirimara" ga-ejupụta na akpaghị aka, ma ị nwere ike iji aka gbanwee ya.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, nye onye ọrụ a ka ọ bụrụ onye nchịkwa site na ịlele igbe kwesịrị ekwesị.
Mepụta paswọọdụ maka akaụntụ gị wee pịa "Emere".
Chere maka usoro OS ma pịa bọtịnụ ahụ. "Mwube ntọala".
A ga-edozi ụfọdụ ntọala na-akpaghị aka.
Pịa bọtịnụ ahụ Rụgharịa.
The GRUB bootloader ga-apụta, nke na ndabara ga-anọgide na buut na OS mgbe 5 sekọnd. Ị nwere ike ime ya na aka, na-echeghị oge, site na ịpị Tinye.
Akara window nke CentOS na-egosi.
Ntọala ntọala ga-apụtaghachi. Oge a ịkwesịrị ịnakwere usoro nke nkwekọrịta ikike ma hazie netwọk ahụ.
Lelee akwukwo nso a na pịa. "Emere".
Iji mee ka ịntanetị, pịa nhọrọ "Network and hostname".
Pịa igodo na ọ ga-agagharị n'aka nri.
Pịa bọtịnụ ahụ "Zuru ezu".
A ga-akpọrọ gị na ntanetị akaụntụ. Pịa ya.
Gbanwee ihe ndozi keyboard, tinye paswọọdụ, wee pịa "Nbanye".
Ugbu a ị nwere ike ịmalite iji usoro ọrụ CentOS.
Ịnwụnye CentOS bụ otu n'ime ihe kachasị mfe, ọ pụkwara ọbụna ime onye na-amalite. Usoro sistemụ a, dị ka mbido mbụ, nwere ike ịdị iche iche na Windows ma bụrụ ihe dị iche, ọbụlagodi na ị jiribu Ubuntu ma ọ bụ MacOS. Otú ọ dị, ọganihu nke OS a agaghị eme ka nsogbu ọ bụla dakwasị ọnọdụ desktọọpụ dị jụụ na ọtụtụ ngwa na ngwa ọrụ.